Rojo Link Fefy - China Hebei Samsung Metal Wire harato
Rojo Link Fefy koa atao hoe diamondra tariby harato amin'ny fanokafana ny diamondra. Izany nataon-tariby vy isan-karazany manenona ny rojo rohy fefy milina. Ny rojo rohy fefy fitaovana misy amin'ny Stainless vy poakaty, ny tafo, ary mifono PVC tariby. Izy ireo dia tokony ampiasaina eo amin'ny tanimboly, fanatanjahan-tena tokotany, orinasa toerana, trano, lalana sy ny fanaraha-maso ny zava-nitranga ho an'ny vahoaka. Fanenomana sy ny Endrika: fanamiana fanokafana, fisaka ambonin'ny, tsotra sy azo ampiharina fampiasana fanenomana. Easy sy hentitra loatra ny fametrahana sy mampifandray. Tra ...
Min.Order Quantity: 100 Meter / Metatra
Supply Fahaizana: 80000 Meter / Metatra isam-bolana
Chain Link Fefy ihany koa ny atao hoe diamondra tariby harato amin'ny fanokafana ny diamondra. Izany nataon-tariby vy isan-karazany manenona ny rojo rohy fefy milina. Ny rojo rohy fefy fitaovana misy amin'ny Stainless vy poakaty, ny tafo, ary mifono PVC tariby. Izy ireo dia tokony ampiasaina eo amin'ny tanimboly, fanatanjahan-tena tokotany, orinasa toerana, trano, lalana sy ny fanaraha-maso ny zava-nitranga ho an'ny vahoaka.
Weaving sy Features: fanamiana fanokafana, fisaka ambonin'ny, tsotra sy azo ampiharina fampiasana fanenomana. Easy sy hentitra loatra ny fametrahana sy mampifandray. Nentim-paharazana Chain-Link Fencing no safidy tsara indrindra ho an'ny manan-tsaina, tsy manana ahiahy, sisin fefy ho an'ny orinasa. Izahay, ka mamoaka indostrialy rojo rohy fefy amin'ny mafana-natsobony tafo, PVC Stainless vy mifono ary tariby. Ny malaza indrindra dia nandrisika rojo rohy fefy, izay manana fanoherana tsara ny rano sy ny rivotra harafesiny. Na izany aza, PVC rojo vy mifono rohy mateza dia tsara noho ny tafo fefy.
Chain Link Fefy Edge Types
Misy karazana telo sisin'ny hisafidy: knuckle - knuckle, manova - manova na knuckle - ny heviny. Rohy rojo fefy amin'ny manova dia matetika manampy fiarovana.
Knuckling - teny io no ampiasaina mba hilazana ny karazana vitsika, selvage azo avy mifanila tsiroaroa ny tariby faran'ny ary avy eo ny tariby hiondrika mifarana indray manome fitoerana ho mihidy. Matetika knuckle dia raha tsy misy fitsipika voalaza.
Nandika vilana - teny io no ampiasaina mba hilazana ny karazana azo avy Nandika vilana selvage mifanila tsiroaroa ny faran'ilay miara-tariby ao amin'ny mihidy helix ny 1-1 / 2 milina Nifandimby, izay mitovy amin'ny telo feno fiovana tsy ampoizina, ka ny tariby cuffing mifarana amin'ny maranitra zoro mba hanome hevitra maranitra. Mifarana ny tariby any an-dafin'ny manova ho, fara fahakeliny, 1/4 mirefy (6.4mm) ela.
Rojo Link Fefy Specifications:
rojo Link Fefy Specifications: Wire savaivony 1.2mm - 5.0mm,
harato habe 20mm -100mm
Roll sakany 0.5m, 1.0m, 1.25m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.5m
Roll-50m ny halavany 10m .
Fefy izay tokony hividy poakaty, ny tafo na rojo-PVC mifono rohy fencing?
Raha te rojo rohy fefy nitsangana 30-40 taona, dia ianao ihany no tokony hividy ny fefy tariby tamin'ny savaivony ny 3mm - 4mm. Raha te-hanana fijery tsara tarehy kokoa dia tokony hividy ny PVC mifono fefy. Mila miaro fotsiny manohitra harafesiny, dia afaka misafidy fefy amin'ny tafo. Raha mikasa ny hametraka fefy ho fahavalo tontolo iainana: amoron-dranomasina, na any amin'ny faritra orinasa asidra. Masìna ianao, mividy rojo PVC mifono rohy fefy. Satria rivotra sy ny ranomasina sira asidra rivo-piainana tena haingana ny zinc corrode ambonin'ny izy, fa tsy hizaka ny polymer coating.
Previous: Misy lafiny enina Wire harato
Manaraka: Aluminium Window Screen
Electro nandrisika Chain Link Fefy
Hot natsobony nandrisika Chain Link Fefy
PVC mifono Chain Link Fefy
Staninless Steel welded Wire harato
Welded harato Panel-Hot-Dip nandrisika Afte ...